Isifinyezo ukulungiselela chloramphenicol ngomthamo ifomu - amaphilisi, amaphilisi camera noma amaphilisi.
Isenzo kwemithi ye chloramphenicol izidakamizwa
Chloramphenicol Tablets kukhona ezibanzi-spectrum ngemithi elwa namagciwane, okuyinto ngempumelelo yokulwa sebuningini kokubili igremu-HIV futhi igremu-negative amagciwane. Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa esebenzayo isinyathelo amagciwane lapho amelana antibiotic ezilandelayo - penicillin akuzange kusize, sulfonamides, i-streptomycin.
Umuthi enza a silwanyana, zikhala amaprotheni alo zamagama, ngaleyo ndlela ngemithamo zokwelapha, lokhu izidakamizwa lingaba izinyathelo bacteriostatic.
I ukumelana izidakamizwa nezilwanyana ezincane kancane, futhi ngaleyo ndlela kungaqali engu- ukumelana nezinye imithi elwa namagciwane isakhiwo efanayo.
Izinkomba chloramphenicol ukulungiselela
Tablets zomuthi asetshenziswe eziningi izifo ukuthi kungadalwa kwegciwane:
imiphumela emibi chloramphenicol izidakamizwa
Lapho izidakamizwa poisoning, noma umane uma hypersensitive babelemisebenzi eminye imiphumela emibi, ezihlobene izinhlelo ezihlukahlukene zomzimba.
Imiphumela engemihle ehlobene igazi:
wehlise inani elithwala umoya-mpilo egazini;
Imiphumela engemihle ehlobene pheshana emathunjini bese nolwelwesi lwamafinyila:
Ukuphinda nesifo fungal.
Imiphumela engemihle ehlobene isimiso sezinzwa esiyinhloko:
ukulahlekelwa kukuzwa (esethola);
Imiphumela engemihle ehlobene komzimba:
Izimo ukusetshenziswa chloramphenicol ukulungiselela
Tablets zomuthi is hhayi Kunconywa esimweni uma isiguli esisodwa noma ngaphezulu kulezi kule mibandela elandelayo (uthi):
izifo igazi, kuhlanganise okusithiyayo wegazi;
izifo fungal kwesikhumba;
kokusebenza kwesibindi kahle;
yobudala kuze iminyaka 3.
Endabeni ka ukweqisa izidakamizwa, uma izidakamizwa isetshenziswa chloramphenicol, bangezwa zimpawu ezilandelayo - yezinkinga kungenzeka kwezitho hematopoietic futhi izinhlelo, ezivame eyayihambisana nokusetshenziswa isikhathi eside amazinga okukhishwa esikhulu kakhulu izidakamizwa. Izinkinga zenzeka umphimbo obuhlungu, isikhumba pallor, ukopha, imfiva kanye ubuthakathaka jikelele zomzimba.
Ezinganeni, ukweqisa izidakamizwa kungabonakala nasemkhakheni:
Ukuze ukuqeda lezi zimpawu, kumele ngokushesha ngemuva izimpawu zabo ziyeka imithi, ugeze esiswini, uqale ukuthola sorbents futhi uqale ukwelashwa lingaze njengoba kudingeka.
Izidakamizwa ukuxhumana chloramphenicol izidakamizwa
Izibhebhe akufanele zithathwe uma kwenzeka ukuthi isiguli enikezwa izidakamizwa kuvimbela ukwakheka igazi, futhi amathuluzi ethile njengokugxeka cytostatics, pyrazolone nemikhiqizo kanye sulfonamides, sengathi ukubanika ithuba ke kubalulekile ukuba balahle ukusetshenziswa chloramphenicol futhi simthole enye.
Kushaqwe izidakamizwa ezifana ne phenobarbital, rifampin, rifabutin futhi kakhulu ukunciphisa okuhlushwa kanye nokusebenza chloramphenicol.
Umuthi kunciphisa umphumela elwa namagciwane of penicillins futhi cephalosporins. Ngaphezu kwalokho, kungaba ukunciphisa kusebenta erythromycin, lincomycin, futhi clindamycin, futhi.
Ukupheka ekhaya Waldorf isaladi
Biography: Jean-Klod Van Damme - hero of the 1990s